Petrus Romanus, 15 अगस्त 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 15 Ọgọst 2021
Petrus Romanus, 15 August 2021 →
Petrus Romanus, 15 अगस्त 2021
Posted on August 20, 2021 by inspiredbythespirit
हाम्रो महिला : “पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा को नाम मा। आमेन। ”
विलियम : उनको पछाडि हजारौं हजारौं मानिसहरु छन् र उनीहरुको टाउको माथि एक झण्डा छ।
हाम्रो श्रीमती : ” मँ तिमीलाई अभिवादन गर्छु, मेरो पवित्र हृदयको अनमोल छोरा: पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन। ”
“आज म दश लाख आत्माहरु संग आउँछु जो Purgatory को गेट्स बाट रिहा गरीएको छु , जो तपाइँलाई indeणी हुनुहुन्छ, मेरो प्यारो छोरा।”
विलियम : उनीहरु सबै घुँडा टेकेर त्रिएक भगवान र पवित्र अवधारणा को लागी धन्यवाद गाउछन्: “र तपाइँ, हाम्रा प्रिय भाइ, जसले हामीलाई भगवानको दया को वर्ष मा बचाउनुभयो।”
हाम्रो महिलाले मलाई सम्बोधन गर्नुभयो र भन्नुभयो:
हाम्रो महिला : ” मँ चाहन्छु कि तपाइँ अब आफैं तयार हुनुहोस्, किनकि म तिमीलाई पर्गेटरीमा लैजाने छु।”
WILLIAM : Purgatory को गेट्स को स्वर्गदूतहरु यसलाई खोल्न।
हाम्रो महिला : “मेरो प्यारो छोरा, यी आत्माहरु लाई हेर्नुहोस् जो स्वर्ग मा प्रवेश को लागी पर्खिरहेका छन्।”
विलियम : त्यहाँ अरबौं आत्माहरु प्रत्याशा मा प्रार्थना गरीरहेका छन्। मेरी मरियमले मलाई उनीहरु माथि क्रसको चिन्ह बनाउन आग्रह गर्नुभयो, जुन मैले गरे। +
हाम्रो महिला : “१०,००० यस दिन स्वर्ग जानेछन्। उनीहरु सबै तिमीमा विश्वास गर्नेहरु हुन्, मेरो छोरो। उनीहरु एक घण्टा भित्र स्वर्ग मा प्रवेश गर्नेछन्। हामी मेरो ठाउँमा फर्कौं, मेरो छोरो। ”
“आज एक गौरवशाली दिन हो, मेरो बच्चा, किनकि धेरै धेरै आत्माहरु स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछन् र मेरो महान पर्वको दिनमा कुनै आत्माको निन्दा हुनेछैन।”
“मेरो बच्चा र बच्चाहरु, आज हामी स्वर्ग मा मेरो विजय मनाउँछौं। त्यसै गरी म हाम्रा सबै बच्चाहरु लाई सोध्छु समय को बारे मा सोच्नुहोस् जब तपाइँ पनि स्वर्ग मा प्रवेश गर्नुहुनेछ, किनकि यो लक्ष्य हो कि मँ हाम्रा सबै बच्चाहरु लाई प्रवेश गर्न चाहन्छु, तर हामी सबै आत्माहरु को लागी प्रार्थना गर्नु पर्छ, किनकि दुश्मन धेरै बलियो छ। यो समय किनभने उनी जान्दछन् कि उनको समय धेरै छिट्टै हुनेछ। प्रार्थना, प्यारा बच्चाहरु, ईश्वरीय दया को च्याप्लेट तपाइँको लागी र संसार को बच्चाहरु को लागी। “
” न्यू साउथ वेल्स को अष्ट्रेलिया कुल मा भएको छ तालाबन्दि किनभने को महामारी , तर किनभने यो न्यू साउथ वेल्स को मान्छे ठूलो कलह उत्पन्न हुनेछ यो, एक अनुचित कदम हो। अधिकारीहरु धेरै डर मा यो मामला मा हेरिरहेका छन्, तर नियन्त्रणमा रहेकाहरु धेरै खुसी छन्, किनकि यसले मेरो बच्चाहरु को लागी ठूलो चिन्ता पैदा गर्नेछ। प्रभारीहरु को लागी प्रार्थना गर्नुहोस्, किनकि उनीहरु को लागी धेरै उत्तर को लागी हुनेछ। मेरा बच्चाहरु, यो महामारी त्यति गम्भीर छैन जति तपाइँ यसलाई बाहिर बनाउनुहुन्छ। प्रार्थना सबै समस्याहरुको समाधान हुनेछ “
“मेरा प्यारा बच्चाहरु, संसार अझै अन्धकारमा जान्छ। मध्य पूर्वका मानिसहरु फ्यान छन्। स्थिति, आशा छ कि अमेरिका तालिबान को चाल बाट बच्न को लागी फिर्ता आउनेछ । तर, प्यारा बच्चाहरु, यो अमेरिकी संरचना लाई खाडीमा राख्नु हो, किनकि अमेरिकी सेनाहरुलाई घर बाट टाढा ल्याएर, अमेरिकीहरु घर मा कम बलियो हुनेछन् जब देशहरु अमेरिकी भूमि मा आक्रमण गर्दछन्।
“प्रार्थना गर्नुहोस्, मेरा बच्चाहरु अमेरिका को लागी , किनकि विपत्तिहरु आउनेछन्, विशेष गरी क्यालिफोर्निया राज्य मा। धेरै राज्यहरु पीडित हुनेछन्, किनकि मानवजाति अझै प्रार्थना गर्न र क्षतिपूर्ति गर्न हाम्रो कल सुन्दैनन्। ब्रिटेनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् , किनकि यस देशमा ठूलो परीक्षा आउँदैछ। ”
” फ्रान्स को लागी प्रार्थना गर्नुहोस् , किनकि यो लामो समय सम्म हुनेछैन जब यो राष्ट्र घेरामा हुनेछ। फ्रान्स को राजा को लागी प्रार्थना गर्नुहोस् , किनकि उसको समय नजिकै छ फ्रान्स को जनता लाई बचाउन को लागी; र पत्रुस द्वितीय को लागी प्रार्थना गर्नुहोस्, किनकि उसको बोलाउने संसारमा चाँडै आउनेछ।
“यो महान पर्व दिवस मा म राम्रो आत्मा को सबै आत्माहरु लाई एक पवित्र संत प्रदान गर्दछु, उनीहरुलाई पूर्णता र पवित्रता सम्म पुग्न मद्दत गर्न। तपाइँ, मेरो पवित्र पुत्र, प्रधान देवदूतहरु र तीन पवित्र संतहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाइँलाई तपाइँको पापको पूर्ति को लागी तपाइँको कारण मा मद्दत गर्न को लागी।
“म तपाइँ र सबै राम्रो आत्माहरु लाई आशीर्वाद दिन्छु, सृष्टिकर्ता को राज्य को लागी मार्ग को अनुसरण गर्न को लागी। + म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु: पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा। आमेन। ”
विलियम : हाम्रो लेडी अब सेन्ट माइकल र मेरो अभिभावक परी संगै ह्वाइट क्रस मा फर्किन्छन्।
हाम्रो महिला : “म तिमीलाई माया गर्छु, मेरो धन्यको छोरा, विलियम: पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा को नाम मा। आमेन। ”
This entry was posted in नेपाली and tagged Petrus Romanus. Bookmark the permalink.
Pagsusuri ng Pakete ng Babala
Luz de Maria, January 18, 2022
Stocks Fall and Precious Metals Rise
Examine your Life and Conscience